Iwuli Ntanetị Twitter na Shiol
Ịchọrọ ịmepụta ọnụnọ na mgbasa ozi ọha na eze karịsịa Twitter? Ntọala siri ike ga-ewe oge na mgbalị, ma Twitter bụ ihe dị iche iche dị ịtụnanya na ịtụnanya maka ime nke a. Ị nwere ike ịmepụta akara gị ma ọ bụ mee ka ọnụ ọgụgụ gị dịkwuo ukwuu site na ịnweta njikọ na ụmụazụ na Twitter. N'akwụkwọ ozi a, Artem Abgarian, Semalt Onye Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Nlekọta Ndị Na - ahụ Maka Ọrụ, ga - agwa gị otu esi amalite ahịa Twitter.
Mezue profaịlụ gị
Ihe mbụ i kwesịrị ime bụ mezue profaịlụ Twitter gị. Mee ka m kwuo ebe a na nke a bụ nzọụkwụ mbụ ịmepụta ika ma kwe ka ụwa mara banyere ọnụnọ gị na ebe nrụọrụ weebụ na nke mmadụ. Na-eburu n'uche na Twitter na-ahapụ ndị ọrụ ya gụnyere njikọ ha na profaịlụ, ya mere, nke a bụ ohere ọlaedo ị gbakwunye njikọ njikọ weebụsaịtị gị ma ọ bụ njikọ njikọ mmemme na profaịlụ gị ka ndị mmadụ wee mara gị n'ụzọ ka mma. Ọzọkwa, ị kwesịrị ịgbakwunye foto ọkachamara na-achọpụta na profaịlụ gị ka ndị ọrụ wee nwee ike ịmara onye ị bụ - how to setup a home office network.
Jikọọ na Ndị Nọ na Niche Gị
Ozugbo i mechara profaịlụ gị, nzọụkwụ ọzọ bụ ijikọta ndị mmadụ na ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ niche. Iji chọpụta onye gbasara ụlọ ọrụ gị ma ọ bụ ubi, ị kwesịrị ịlele nchịkọta Twitter wee pịa bọtịnụ ndị na-eso ụzọ iji lee anya na ndepụta ndị ahụ. Ọzọkwa, ị nwere ike iji aka na-ele ndị mmadụ anya na nchọta ọchụchọ Twitter ma nyochaa profaịlụ ha tupu ha ejikọta ha..Ụzọ dị mfe iji jikọọ na influencers bụ site na ịde ha na tweet gị kwa ụbọchị. I kwesịrị ịjụ ọtụtụ ajụjụ ma gbalịa ike gị iji dọta ọtụtụ ndị ọzọ ka ha wee bịa ma zaa ajụjụ gị.
Kpebisie ike na oge kachasị mma na Tweet
Dabere na niche na ebe ndị na-eso ụzọ gị, ị nwere ike ikpebi oge kacha mma maka tweets. Gbalịa jiri ụfọdụ ngwaọrụ Twitter iji mee ka o kwe omume. Dịka ọmụmaatụ, Twittersphere bụ ngwá ọrụ dị mma nke na-ekwe nkwa ịnye gị ozi dị mkpa nke mgbe ụmụazụ gị nọ na ntanetị nakwa oge kacha mma maka tweets.
Kwuo Ihe Ọdịnaya Bara Uru
Twitter na-enye anyị nza nke nhọrọ na echiche nkesa ọdịnaya. Ị nwere ike irite uru na ha iji mee ka ọnụ ọgụgụ gị dị elu. Ọ dị ezigbo mkpa ịkọkọrịta ọdịnaya bara uru ma nye ụmụazụ gị oge iji gụọ ma gbasaa ọdịnaya gị. Gwa ha otu ugboro n'otu ụbọchị ma zaa ajụjụ ha, dabere na ọdịnaya ị kwusara na Twitter.
Soro na Mkparịta ụka Twitter
Mkparịta ụka Twitter bụ nhọrọ iji kpọtụrụ ndị ọzọ ma hazie ihe gị. Ị ga-erite uru na ya ma mee ka ọnụọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ gị. TweetReports bụ nhọrọ ntanetị na Twitter na-enye aka na-enyere gị aka isonye na mkparịta ụka mgbasa ozi. Ị nwere ike ịgbasa ma ọ bụ warara ndepụta naanị iji soro ndị na-eso ụzọ gị kwurịta okwu ma gbalịa ime ka ha bụrụ ndị mgbapụ gị.
Na n'elu ihe n'uche, ị nwere ike nweta nza nke Twitter na-eso ụzọ ma nwere ike mụbaa gị ika mmata na oke.